Kitra – «ligue des champions»: hidona amin’ny Barcelone ny Lyon | NewsMada
Kitra – «ligue des champions»: hidona amin’ny Barcelone ny Lyon
Tontosa, omaly alatsinainy, tany Nyon Soisa, foiben’ny (UEFA), ny antsapaka ho an’ireo ekipa 16 hiatrika ny lalao ampahavalon-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, taranja baolina kitra «ligue des champions».
Hangotraka ny lalao satria klioba andrarezina no miandry ireo ekipa frantsay, amin’ity. Anisan’izany, ny fihaonan’ny FC Barcelone amin’ny Lyon. Maozatra ho an’ny Lyonnais, ny hifanehitra amin-dry Messi sy ry Suarez, manatombo eo amin’ny traikefa sy ny fahazaran-dalao goavana toa izao.
Etsy an-kilany, hidona amin’ny Manchester United, ekipan’i José Mourinho sy i Paul Pogba, ny Paris St Germain. Sambany eo amin’ny tantarany, no hifanehitra amin’ity ekipa anglisy ity, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, ry Mbappé sy ry Neymar. Hiendrika famaranana kely ity fihaonana ity satria ny samy andrarezina no hifanenjana. Hampiantrano ny lalao mandroso ny anglisy, amin’ity.
Anisan’ny lalao goavana ihany koa ny fihaonana eo amin’ny Liverpool sy ny Bayern de Munich. Hatreto aloha, mifandanja ny isan’ny fandresena eo amin’ny roa tonta. Tombony ho an’ny ekipan’i Alemaina fotsiny, ny fandraisany ny lalao miverina. Na izany aza, klioba mafy no miandry azy amin’ity.
Hifampitana amin’ny Atletico Madrid kosa ny Juventus de Turin sy i Ronaldo. Lalao tena hangotraka ihany koa satria hifampitana ny samy tompony.
Tsiahivina fa ny 12 sy 13 ary ny 19 sy 20 febroary 2019 ny lalao mandroso ary ny 5 sy 6 ary ny 12 sy 13 marsa, ny fihaonana miverina.
Ny vokatry ny antsapaka :
-Schalke 04 # Manchester City
-Atletico Madrid # Juventus de Turin
-Manchester United # Paris St Germain
-Tottenham # Borussia Dortmund
-Lyon # FC Barcelone
-AS Rome # FC Porto
-Ajax Amsterdam # Real Madrid
-Liverpool # Bayern de Munich